10 Iningi Lamadolobha Ogwini AseYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 10 Iningi Lamadolobha Ogwini AseYurophu
Isikhathi sokufunda: 6 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 15/01/2021)
Nge-Atlantic Ocean ngakolunye uhlangothi namadolobha amahle kakhulu kolunye, le 10 amadolobha amahle kakhulu asogwini eYurophu ayizindawo ezingcono kakhulu zokuphumula nezingasoze zalibaleka. Ukuphumula emaweni, ulalele amagagasi olwandle, ukungena emanzini olwandle acwebile, noma ukuthola izinganekwane ezingemuva kwamachweba nemibhoshongo, kungokuhlangenwe nakho okukhethekile ozokuthola kuphela ngasogwini lwase-Italy, France, naseNgilandi.
1. Idolobha Elihle Lasogwini E-Italy: Amalfi Coast
Izindlu ezidumile ezibheke uLwandle lwaseTyrrhenian lwedolobha lase-Amalfi ziyi-postcard-ephelele. Ngakho-ke, I-Amalfi iphakamisa wonke amadolobha asogwini lwase-Amalfi njengedolobha elihle kakhulu elisogwini e-Italy. Ngaphezu kwalokho, uzothola ukuthi iyindawo yasehlobo ephupha kakhulu eYurophu. Lokhu kungenxa yamanzi aluhlaza okwesibhakabhaka amele amawa, nezindlu ezimibalabala ezakha ukubekwa okuhle kwe-escapade ngasolwandle.
Ngaphezu kwalokho, uma ufisa ukuthola okuningi, bese kuba yi-Amalfi Cathedral ne-villa Rufolo, zinikeza ukubukwa okumangazayo koLwandle iMedithera nengadi. Nokho, okugqamisiwe kwe-Amalfi yi- 40 amaminithi’ shayela usuka eVietri Sul Mare uye ePositano nezinye ze imibono obabazekayo lolwandle.
2. Idolobha Lasogwini Elithandeka Kakhulu EFrance: ISaint-Malo
Ngenkathi uSaint-Tropez noNice besenjalo 2 emadolobheni athandwayo asogwini eFrance, ISaint-Malo eBrittany esiteshini saseNgilandi ingasogwini Igugu elifihlekile. Lokhu kungenxa yomlando ocebile nezindaba ezenzeka osebeni lwaseSaint-Malo. ESaint-Malo, uzobuyela emuva ngezikhathi ngezikhathi zepirates, nama-corsairs aseFrance, ukulwa nokuvikela iGrand France ezingozini.
Namuhla, Izindonga zaseSaint-Malo ziyamangalisa ngokuhambahamba edolobheni elidala, admiring the sunset, nokubuka amagagasi. Ukuyazisa ngokugcwele intelezi kaSaint-Malo kufanele uhlale ubusuku futhi uvakashele iziqhingi zaseGrand Be nasePetit Be forts.
3. Idolobha Elihle Lasogwini EYurophu: Lerici, Italy
Ababaningi abake bezwa ngedolobha laseLerici eMfuleni i-Italy, elinye lamadolobha amahle kakhulu asogwini eYurophu. Idolobha eliyitheku lomakhelwane wayo iLa Spezia kungaba yindawo yokuqala uhambo lwakho oluya eCinque Terre, kodwa uLerici unomlingo wakhe ongatholakalanga. Uzomthola uLerici 8 Amakhilomitha aseningizimu-mpumalanga yeLa Spezia, ngezindlu ezipendiwe, amakhova, itheku, isigodlo sekhulu le-12 esibheke olwandle, imibono emangalisayo, futhi izintaba ngasogwini.
Ngaphezu kwalokho, ILerici iyindawo enhle eyisisekelo yohambo lwakho oluya ogwini lwase-Italy: ICinque Terre ebabazekayo, I-Portofino, nePortoverane. Ungenza futhi uhambo losuku oluya ePisa enhle.
ILa Spezia iya eRiomaggiore Ngesitimela
UFlorence uya eRiomaggiore Ngesitimela
UModena uya eRiomaggiore Ngesitimela
ILivorno iya eRiomaggiore Ngesitimela
4. Idolobha Elihle Lasogwini EFrance: ICassis-Marseille
Amawa e-limestone, amanzi acwebile, ukubukwa okuhle kogu kusuka kumathilomu asendleleni, yenza iCassis idolobha eligudle ugu. ICassis itholakala phakathi kwewa elide kakhulu elisogwini eYurophu, EKap Kanaille, kanye ne-limestone emhlophe i-Calanques. Ngaphezu kwalokho, eCassis, uzothola okuhle kunakho konke emhlabeni – Provence izivini, noLwandle Olubabazekayo lwaseMedithera.
Ukufaka ingilazi yewayini iRose, ukubukela abadobi, kuzoba ukugqama kweholide lakho kuleli dolobha elisogwini lomlingo. Leli gama eliyigugu laseFrance ligibele isitimela kude neMarseille, kanye nokubaleka okuphelele okuvela edolobheni elimatasa.
EParis eMarseilles Ngesitimela
IMarseilles iya eParis Ngesitimela
IMarseilles iya eClermont Ferrand Ngesitimela
EParis eya eLa Rochelle Ngesitimela
5. I-Arromanches-Les-Bains EFrance
Idume ngokufika kweNormandy, I-Arromanches yidolobha elihle elisogwini esifundeni saseNormandy eFrance. Ngokuphikisana nephuzu lezempi kwake kwaba, namuhla uzothola idolobha elihle lolwandle ogwini lwase-Atlantic.
Ngakho-ke, ulungele iholide elingenakulibaleka ngasolwandle, nge-scuba diving, I-yachting, ukugibela amahhashi ebhishi legolide, nokugeza ilanga. Ngempelasonto emfushane noma ende, uzokujabulela ulwandle nge-Arromanches-Les-Bains’ 550 izakhamuzi, futhi ngizwe Umlingo waseNormandy.
EParis ukuya eRouen Ngesitimela
EParis eya eLille Ngesitimela
Rouen to Brest With A isitimela
Rouen uya eLe Havre Ngesitimela
Ugu lwaseCornish selulekela ku 679 amakhilomitha amawa, imihume, namabhishi. Lokhu kunezela esimweni saseCornwall njengedolobha elihamba phambili lokuntweza olwandle e-UK. Ngakho, uma uhlela ukwengeza imisebenzi yezemidlalo yamanzi eholidini lakho ngasolwandle, ICornwall iphelele.
Idolobha elihle kakhulu elisogwini eGreat Britain yinhlonhlo enhle. Ngakho-ke, nomaphi lapho uya khona, uzozithola umi ogwini olumangalisayo. Ngokubukwa okuhle kakhulu kwamabhishi amahle kakhulu aseCornwall nolwandle, ungahamba indlela yaseSouth West Coast.
7. Idolobha Lasogwini i-Honfleur EFrance
Uma ufuna idolobha elingcono kakhulu elisogwini eFrance, ke Honfleur impendulo. Endaweni yomhlangano yomfula uSeine nolwandle, emfuleni cruises, izindlu ezimibalabala ezibonisa olwandle, futhi uhamba ngasogwini, yenza i-Honfleur enye ye 10 amadolobha amahle kakhulu asogwini eYurophu.
U-Okthoba yisikhathi esihle sokuya futhi ujabulele umoya ohlanzekile wasolwandle nolwandle e-Honfleur. Kuzoba yindlela enhle yokuvalelisa ehlobo bese ucwilisa ilanga futhi ugweme umswakama, nezixuku zezivakashi.
Rouen to Paris With A Isitimela
EParis eCalais Ngesitimela
Rouen eCalais Ngesitimela
8. ISanta Cesarea Terme Italy
ISanta Cesarea Terme yidolobha elihle elisogwini ePuglia. Ebheke olwandle, uzothola ukujabulela ulwandle oluhle futhi okugeza okushisayo eholidini lakho lase-Italy.
Ngokuphambene namanye amadolobha asogwini anemibala e-Italy, ISanta Cesarea ihlukaniswa yi Izakhiwo zamaSulumane. Lokhu kusho, izindlu ezinhle ezimhlophe nemibhoshongo zizungeze idolobha, futhi ubukeke muhle impela nolwandle oluhlaza okwesibhakabhaka emkhathizwe. Uma unquma ukuvakashela leli dolobha elihle elisogwini, ungahle ube nenhlanhla yokuhlala kwelinye lamahhotela amaningi aguquliwe edolobheni.
INaples iya eBari Ngesitimela
UBari uya eFasano Ngesitimela
ENaples eya eFasano Ngesitimela
9. I-Brugge (esetshenziswa), Belgium
Idolobha Elidala laseBrugge lingenye yezindawo ezinhle kakhulu amadolobha amadala amahle aseYurophu. IBrugge nayo iphethe isihloko njengenye ye- 10 amadolobha amahle kakhulu asogwini eYurophu. Imishanguzo ngasolwandle yinto enhle kakhulu emehlweni, ngemisele yayo, izikebhe, nezindlu ezinhle.
Ngogu oluhle, akumangalisi ukuthi amakhosi amaningi aseFlemish akhethe, I-Brugge njengekhaya labo. Ngakho-ke, kufanele ulungele inani elikhulu kakhulu lezinqaba nemibhoshongo ebheke olwandle.
Idolobha elihle laseVenice livala lethu 10 amadolobha amahle kakhulu asogwini eYurophu. Izakhiwo, Gelato, futhi isikebhe ugibele yenza iVenice indawo ephuphayo ngokuphelele ngasolwandle.
IVenice ihlala olwandle, futhi yingakho kuyidolobha elisogwini lokugcina kulo lonke elaseYurophu. AmaNtaliyane athanda iVenice, futhi izivakashi ziyayithanda nayo. Uzoba nesikhathi esimangalisayo sokuzulazula ezitaladini nasemigwaqweni emincane.
Lapha ngesikhathi Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza uhlele uhambo lwakho oluya “eMadolobheni Ase-Coastal Ahle Kunazo Zonke EYurophu”.
Ngabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “Amadolobha Ogwini Ase-10 Ahle Kunazo Zonke EYurophu” kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbeautiful-coastal-towns-europe%2F%3Flang%3Dzu ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)